Degmada Iimaybari Iyo Shirwaynihii Abaabulka Waxbarashada. - Cakaara News
Degmada Iimaybari Iyo Shirwaynihii Abaabulka Waxbarashada.
Iimaybari,(cakaaranews), Arbaca, 5ta October, 2016. Waxaa ka dhacay magaalada iimaybari ee xarunta degmada iimaybari ee gobolka shabeele shirwaynihii abaabulka diwaangalinta waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2009TI.
Waxaana shirkan hogaaminayeen kooxda heer deegaan ee abaabulka waxbarashada gobolka shabeele iyo masuuliyiinta maamulka degmada iimaybari, taasi oo ay ka soo qaybgaleen dhamaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada iimaybari iyo santarada hoos yimaada degmada imaybari
Kooxda isku dhafka ee abaabulka waxbarashada heer deegaan gobolka shabeele oo u hogaaminayo mudane Cabdisalaan Yuusuf Ibrahim ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada uga warbixiyay ahmiyada ay leedahay waxbarashada. Waxayna u sheegeen bulshada in ay keenaa dhamaanba caruurta gaadhay da’da waxbarashad goobaha waxbarashada ardaydii horena ku soo celiyaan fasalada ay u gudbeen. Waxaa kale oo ay bulshada ku booriyeen in ay ka faa’iidaystaan waxbarashada dadka waawayn.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku Dhaqan degmada imaybari ayaa sheegay in ay ka qayb-qadanayaan diyaarna u yihiin sidii loo keenilahaa caruurtooda gaadhay dada waxbarashada goobaha waxbarashada kuwii hore ugu jirayna loo keenilahaa fasalada ay u gudbeen
Dhanka kale kooxda ka isku dhafka ah ee abaabulka waxbarashada heer deegaan ee ku qoran gobola shabeele ayaa shirkan noocan oo kale ah u qabtay qaybaha kala duwan bulshada ee ku dhaqan degmada Beercaano ee gobolka shabeele. Waxayna hore uga soo qabteen shirarkan abaabulka waxbarashada degmooyinka kale oo gobolka shabeele.